ခင်မျိုးချစ် (၁ မေ ၁၉၁၅–၂ ဇန်နဝါရီ ၁၉၉၉)သည် မြန်မာ အမျိုးသမီး စာရေးဆရာမတစ်ဦး ဖြစ်ပြီး စစ်ကိုင်းမြို့၌ အဖ ရာဇဝတ်ဝန်ထောက် ဦးတော်၊ အမိ ဒေါ်သန်းတင် တို့က ၁၉၁၅ ခု မေ ၁ ရက်နေ့တွင် မွေးဖွားသည်။ မွေးချင်း ငါးယောက်တွင် အကြီးဆုံး ဖြစ်သည်။ အမည်ရင်းမှာ မခင်မြ ဖြစ်သည်။
၁၉၂၉ တွင် သရက်မြို့ အစိုးရ အထက်တန်း ကျောင်းမှ သတ္တမတန်း၊ ၁၉၃၂ တွင် မိတ္ထီလာမြို့ အမျိုးသား ကျောင်းမှ ဆယ်တန်း အောင်မြင် ခဲ့သည်။ ၁၉၃၂ တွင် တက္ကသိုလ်သို့ ရောက်သည်။ ၁၉၃၃ တွင် တက္ကသိုလ်မှ ထွက်သည်။ ၁၉၃၉ တွင် ဦးခင်မောင်လတ်နှင့် လက်ထပ်သည်။ ၁၉၅၂ တွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှ ဝိဇ္ဇာဘွဲ့ (အင်္ဂလိပ်စာ အဓိက) ရရှိ ခဲ့သည်။
၁၉၃၂ - ၃၃ တက္ကသိုလ်မဂ္ဂဇင်း ဝသန္တစာစောင်တွင် ဆာဝါ (လ) တာစကော့၏ ကဗျာ The Lay of The Last Minstrel ကို မှီးထားသော "ဇာတိမာန်"နှင့် "တို့ပြည်၊ တို့မြေ" တေးထပ် နှစ်ပုဒ် ရေးခဲ့ရာ မဂ္ဂဇင်း အယ်ဒီတာက 'ခင်မျိုးချစ်' ဟူသော ကလောင် အမည် ပေးခဲ့ရာမှ အစပြုပြီး ခင်မျိုးချစ် အမည် တွင်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် ဒဂုန်မဂ္ဂဇင်း၊ သူရိယသတင်းစာ၊ ဘားမားဂျာနယ် တို့တွင် ဆောင်းပါးများ ရေးခဲ့သည်။ သူရိယ သတင်းစာတွင် ကောလိပ် ကျောင်းသူ အခန်းဆက် ဝတ္ထုရှည် ရေးခဲ့သည်။
၁၉၉၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၂ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့၌ ဲခင်မျိုးချစ် (၁ မေ ၁၉၁၅–၂ ဇန်နဝါရီ ၁၉၉၉)သည် မြန်မာ အမျိုးသမီး စာရေးဆရာမတစ်ဦး ဖြစ်ပြီး စစ်ကိုင်းမြို့၌ အဖ ရာဇဝတ်ဝန်ထောက် ဦးတော်၊ အမိ ဒေါ်သန်းတင် တို့က ၁၉၁၅ ခု မေ ၁ ရက်နေ့တွင် မွေးဖွားသည်။ မွေးချင်း ငါးယောက်တွင် အကြီးဆုံး ဖြစ်သည်။ အမည်ရင်းမှာ မခင်မြ ဖြစ်သည်။
၁၉၉၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၂ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့၌ ဲကွယ်လွန်သည်။
Three Years under the Jpas (1945)
Jump up↑ ရာပြည့် ဦးစိုးညွန့် (ဇူလိုင် ၂ဝဝ၅). ၂ဝ ရာစု မြန်မာ စာရေး ဆရာ ၁ဝဝ အတ္ထုပ္ပတ္တိ အကျဉ်း.
Jump up↑ မလိခ. မြန်မာ စာပေ အဘိဓာန် (၁), ၁၈၉ - ၁၉၁.
Jump up↑ မောင်ဇေယျာ. မြန်မာ လူကျော် ၁ဝဝ ပထမတွဲ, ၁၉ - ၂၂.
Jump up↑ လူထု ဒေါ်အမာ. လွမ်းသူ့စာ, ၃၇၄ - ၃၈၂.
Jump up↑ ပြန်/ဆက် စာတည်း အဖွဲ့. နှစ်ဆယ်ရာစု မြန်မာ စာရေးဆရာများနှင့် စာစု စာရင်း, ၁၆ - ၁၈.
Jump up↑ မောင်ကျော်သာ (ဩဂုတ် ၁၉၆ဝ). "ခင်မျိုးချစ်". မြဝတီ.
Jump up↑ ဒေါက်တာ ခင်မောင်ဝင်း (ဇန်နဝါရီ ၂ဝဝ၃). ခင်မျိုးချစ်၏ ဘဝနှင့် စာပေ ခရီး. စာအုပ်လောက, ၆၂ - ၇၂.
Jump up↑ (၂ဝဝဝ) မြန်မာ့ စွယ်စုံကျမ်း နှစ်ချုပ်, ၁၄၄.
Jump up↑ ကန်တော့ခံ သက်ကြီး စာပေ ပညာရှင်များ၏ အတ္ထုပ္ပတ္တိ (သက္ကရာဇ် ၁၃၅၇), ၉၄ - ၉၅.